Store Account | Proven International Co., Ltd. ﻿
Company: Proven International Co., Ltd.
•	မိမိအလုပ်အား တာဝန်ယူနိုင်သူ၊ တာဝန်ခံနိုင်သူဖြစ်ရမည်
•	Store နှင့် ပတ်သက်သောစာရင်းပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Store တွင်ထားသင့်သော Stock Level သဘောတရားနားလည်သူဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Accounting သဘောတရားနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
•	Software အသုံးပြုတက်သူဖြစ်ရမည်။
•	Purchase Order စာရင်းခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Excel ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ ။
•	ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်၊ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ (သို့) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Work location No.(K-8/k-9), Thiriyadanar Latt Kar Zay,Near of Aung Mingalar Bus Stop
89 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီးစကားအပြောအဆိုသွက်လက်ပြေပြစ်၍လူမှု့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ Sales & Marketing Representative (Regional)
92 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Responsible and report to General Manager. •	Create the new products, penetration, expand the new markets. •	Prepare monthly, quarterly, yearly and sales & marketing budget plan and report to the superior and get the approval to implement. •	Analyze the data and develop sales & marketing activities. •	Conduct the received of products, delivery, collecting the outstanding balances from customers’ credit terms, credit limitswith respective persons and finance department. •	responsible to be correct and accurate of the ...
•	Responsible and report to Admin & HR Manager / corporate HR Manager/Admin &HR Director. •	Establish recruitment process, advise on recruitment practices and candidate selection. •	Implement the operational activities of HR department . •	Check and report to manager for the requireed position , PR Form, WE, JD, JS of each department . •	Make the quarterly, yearly budget plan for employee recruitment process and report to Corporate HR Manager through manager. •	Make orientation and explain the company rules and regula ...
392 Days, Full time , Distribution / Logistic
395 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Creative ပြုလုပ်ခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရပါမည်။ •	Customer Complain များကို လိမ်မာပါးနပ်စွာဖြေရှင်းတတ်သူဖြစ်ရပါမည်။
•	မိမိလက်အောက်ရှိ ၀န်ထမ်းများကို ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်ခရီးသွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer Advance Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး တာဝန်ယူမှု (သို့) တာဝန်ခံမှုရှိတဲ့သူဖြစ်ရမည်။
396 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	မြို့တွင်းလမ်းကြောင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားတတ်သူဖြစ်ရပါမည်။ •	နယ်ခရီး သွားနိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
498 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Good interpersonal and project management and execution skills.
Store Account Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Proven International Co., Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs Distribution / Logistics Jobs in Myanmar, jobs in Yangon